🥇 ▷ Sida loo arko soo bandhigida iPhone 11 cusub? Jadwalka ✅
Sida loo arko soo bandhigida iPhone 11 cusub? Jadwalka
Apple waxay soo bandhigi doontaa jiilkeeda cusub iPhone 11 Sebtember 10 iyo iOS 13. Apple Waxaad horey u dirtay casuumadaha xaflada. Keyword-ka iPhone 11 iyo macruufka 13 ayaa la rajaynayaa laakiin hadda Apple waxba ma uusan xaqiijin.
Waxaan kuu sheegeynaa halka laga daawado tooska iyo sida loo raaco tooska tooska ah ee Keynote Apple September, halkaas oo lagu soo bandhigi doono iPhone 11 2019.
Sebtember kaliya maahan dhamaadka xagaaga iyo ku soo noqoshada joogtada ah, laakiin waa bilowga koorso tikniyoolajiyadeed oo cusub oo loogu talagalay shirkadaha iyo shirkadaha qaybta. Oo ka mid ah Apple, kuwaas oo dooranaya bisha Sebtember si ay u muujiyaan moodooyinka cusub ee wax soosaarkooda calanka: iPhone. Maantana, Talaadada, Sebtember 10, waxay noqon doontaa markii aan aragno sannad kadib warar xan ah iyo ‘daadis’ iPhone-ka cusub ee la sugayo ee cusub ee 2019.
Waxaa la filayaa inay soo bandhigaan jiilka xiga ee iPhone, ku-xigeennada iPhone XR, XS iyo XS Max.
Shirkaddu waxay gelisay soo bandhigida wararkeeda gudaha Masraxa Steve Jobs laga keenay xarunta Cupertino (Mareykanka), Sebtember soo socda 10 saacaddu markay tahay 10:00 a.m. (7:00 p.m. gudaha Jasiiradda Spain) ama 10 a.m. PDT hota ee Badweynta Kaliforniya.
The websaydhka shirkadda Waxay horey u leedahay meel bannaan oo loogu talagalay munaasabaddan gaarka ah, oo ka socota halka aad ku noolaan karto oo aad ku noolaan karto, kaas oo la filayo inuu ku dhawaaqo aaladda soo socota ee qoyska iPhone, oo ah kuwa ku guuleysta marinnada. iPhone XR, XS iyo XS Max, oo la soo bandhigay sanadkii la soo dhaafay.
IPad-ka cusub ee loo yaqaan “iPhone 11” (ku-beddelashada iPhone XR), iPhone 11 Pro (ku-xigashada iPhone XS) iyo iPhone 11 Pro Max (oo ah kan beddela iPhone XS Max).
Apple Waxay sidoo kale ku dhawaaqi doontaa badeecado kale sida iPad Pro Pro cusub, oo ah 10.5 inji oo cusub oo noqon doonta moodalka ugu jaban isla markaana beddeli doona 9.7 inch oo ah ‘inch’; mid cusub ayaa imaan lahaa 16-inch MacBook Pro iyo suurtagal ahaan Apple Watch Series 6 iyo Apple TV +
Dabcan, iPhone cusub ma imaan karo la’aantiis barnaamij cusub iyo Apple horeyba ka shaqee macruufka 13, nooca si macquul ah ugu dhici doona macruufka 12. Sida laga soo xigtay Bloomberg, macruufka 13 wuxuu yeelan doonaa astaamo cusub iyo isbeddelo muuqaal ah oo ba’an.
Sidee loo raacaa qoraalka muhiimka ah ee Apple live iyadoo la soo bandhigayo macruufka 13, iPhone 11, iPad Pro, MacBook Pro, Apple Watch Y Apple TV + qalab kasta?
Soo bandhigid Apple Keynote Sebtember 2019: taariikhda, waqtiga iyo halka laga daawado qulqulka. Eeg Khadka tooska ah ee tooska ah ‘Applenote’ tooska ah khadka Apple Apple September Sannadkan sidoo kale loogu talagalay YouTube
Waxay toos uga socotaa Masraxa Steve Jobs saacaddu markay tahay 10 am San Francisco waqtiga, 7 pm waqtiga Isbaanishka, Apple Waxay ku baahin doontaa filimkeeda ‘Main Key Live live’. Iyo sida caadiga ah, kuwa Cupertino waxay soo bandhigi doonaan ikhtiyaarka si ay u daawadaan Keynote live iyagoo ka soo qulqulaya websaydhkooda, oo marka loo eego aaladda aad doorato, tani waa waxa aad u baahan tahay inaad si fiican u aragto
Sida loo arko soo bandhigida Apple Keynote Sebtember 2019 laga bilaabo iPhone, iPad, iPod ama Mac?
Sida ay tahay inaad ogaato haddii aad tahay kuwa raacsan dhacdooyinkaan, aaladaha macruufka Waxaad ka daawan kartaa qulqulka rasmiga ah ee Safari. Waxa kaliya ee ay tahay inay sameeyaan waa aad bogga dhacdada oo taabo ‘Ciyaar’. Waa muhiim in la isticmaalo Safari oo ha isku deyin in aad ka furatid barta kale biraawsar, maxaa yeelay waxay u badan tahay inaysan shaqeynaynin.
Sida loo arko soo bandhigida Apple Keynote Sebtember 2019 laga soo qaado telefoonka Android ama kumbuyuutar Windows ah?
Hadaad haysatid telefoon Android ah ama kumbuyuutar kumbuyuutar oo Windows leh, ha walwelin, waad ku raaxeysan kartaa furaha xiitaa haddii aadan haysan Safari. Windows dhexdeeda Waxaad fursad u leedahay inaad ku isticmaasho biraawsarka Edge, laakiin haddii aadan rabin, waxaad isticmaali kartaa VLC:
VLC soo dejiso ee Windows ama Android
Xulo ikhtiyaarka “Fur shabakad”
Ku dheji xiriirinta soo socota: https://p-events-delivery.akamaized.net/18oijbasfvuhbfsdvoijhbsdfvlvljkb6/m3u8/atv_mvp.m3u8.
Sida loo arko soo bandhigida Apple Keynote Sebtember 2019 laga bilaabo YouTube?
Sannadkan sidoo kale loogu talagalay YouTube. Waxaad ka daawan kartaa kanaalka YouTube ee Apple. Laakiin waxaan kaaga tageynaa fiidiyowga si aad ugala socotid warkan
Waa maxay jadwalka iyo taariikhda bandhigga Apple Keynote Sebtember 2019?
Waxay noqon doontaa bisha Sebtembar 10 saacaddu markay tahay 10:00 a.m. (7:00 p.m. gudaha Jasiiradda Isbaanishka)
Jadwaladaha muhiimka ah ee Apple ee sanadkan ayaa lagu qaban doonaa Masraxa Steve Jobs laga keenay xarunta Cupertino, waa kuwan soo socda:
Isbaanish: 19:00 (18:00 Jasiiradaha Canary)
Meksiko: 12:00 AM
Kolombiya / Ecuador / Peru: 12:00 AM
USA (Kaliforniya) 10:00 AM
Maxaan ku arki doonaa soo bandhigida Apple?
Taasi waa had iyo jeer malaayiinta doolar su’aasha, laakiin shaki kuma jiro shaki ku saabsan iPhone XI 2019 cusub. Sida muuqata, marka loo eego xogtii u dambeysay, seddex moodal oo iPhone cusub oo magac cusub leh ayaa la soo bandhigi doonaa:
Tani waxay sii wadi doontaa isbeddelkan si ay u soo bandhigto seddex moodel oo mobiil ah, iyadoo 11 Pro ay tahay nooca caadiga ah, 11 Pro Max wuxuu la mid yahay iPhone XS Max iyo midka caadiga ah ee iPhone 11 oo ah kan ku guuleysta iPhone XR, oo ah nooca ugu ‘raqiisan’ saddexda Apple ee 2018. Haddii ay run tahay, xitaa Pro wuxuu noqon lahaa mid cusub, maadaama aan ereygan ku aragnay tusaale ahaan ipadka, laakiin waligiis kuma xirneyn iPhone. Waxa ku dhawaad ​​la hubo waa naqshada cusub iyo tan muranka badan ee kaamirada gadaal, taas oo qaabkeeda afar geesoodka ah ee geesaha wareegaya ay kala qeybineysay taageerayaasha muddo dhan hal sano. Mabda ‘ahaan, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max waxay yeelan doonaan kamarad gadaal loo yaqaan’ Triple Lens camera ‘, halka iPhone 11 ay lahaan doonaan qalabka labada sawir ee Dual. Intaa waxaa sii dheer, waxaa la filayaa ma aha oo kaliya waxtarka tamar wanaagsan, laakiin sidoo kale batteriga weyn, lagama maarmaanka u ah labadan kamaradood ee ‘Triple’ iyo WiFi oo la wanaajiyay iyadoo la qaatay WiFi 6.
Alaabooyin badan oo Apple ah marka la soo bandhigayo? Haddii aan eegno sanadkii la soo dhaafay, Keynote Apple September Sebtember 2019 waxaa ku jiray moodello cusub iyo muuqaal soo socda ee Apple Watch, the smart watch of Apple. Waad filan kartaa Mac Pro laakiin ma ahan ipadka cusub ee loo yaqaan ” MacBooks ‘cusub xaflad gooni ah bisha soo socota, Oktoobar 2018. Macruufka 13 wuxuu sidoo kale u imanayaa sidii nidaam hawlgal cusub.
Ma raaci doontaa Apple isla isbeddelka sannadkan, ama Sebtember Sebtember ayaa noqon doonta bandhiga buugga tusaleyaasha cusub ee Apple? Dhowr saacadood gudahood waxaan kaga tagaynaa shaki.
Apple waxay aragtay sida gaarka u ah ‘iPhone 11’ cusub, sida marinnada loo soo bandhigi doono bulshada dhexdeeda Sebtember 10 waxaana laga heli karaa seddex nooc oo kala duwan: iPhone 11, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max, oo ah kan ugu sareeya. nooca-nooc ee shirkadda sanadkaan. Terminalkan ka sahlan ayaa soo bandhigi doona guddi IPS ah oo leh qaraar waxyar ka sarreeya HD kaas oo u tarjumay 1792 x 828 pixels, kaas oo lagu xoojin doono SoC Apple A13 cusub oo ay weheliso 4 GB oo RAM ah oo dhammaanteedna ku shaqaynaya batari 3110 mAh ah. taasi wax yar baa og. Waxaa lagu heli karaa awoodo aan fidin karin oo ah 64GB / 256GB / 512GB, waxaana ka muuqan kara 12 megapixel labaal gadaal ah iyo 12 MP kamarad hore ah. Qiimaha uu ku bilaaban doono wuxuu noqon doonaa 749 doolar oo loo tarjumi karo qiimo ku dhow 859 euro.